Sahanina Any Ivelany Ny Ady Ao Iraka sy Afghanistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Novambra 2017 6:40 GMT
Filipina no safidy ambony indrindra ho an'ireo orinasa ao Etazonia manao ny dingam-pihariana maka mpiasa ivelany na BPO.
Ny asa amin'ny call center no asa irian'reo tanora marobe nahazo diplaoma ao Filipiana satria tsara karama. Nahazo 1,12 miliara dolara tamin'ny fidiram-bola ny indostrian'ny BPO ao Filipina ary nampiasa olona maherin'ny 112.000 tamin'ny taona lasa.
Noho ny karama ambany kokoa ao amin'ny firenena, namorona seha-pihariana any ivelany toy ny fikarakaràna mpanjifa, fandefasana toro-lalana ara-pitsaboana, fampandrosoana rindrambaiko sy fanentanana ireo orinasa any Etazonia.
Ankehitriny, misy asa iray “sahanina any ivelany” (outsourced) any Filipina (vakio: mpikarama an'ady) ao Iraka sy Afghanistan.
Nitatitra ny gazety iray ao Manila fa Filipiana 300 mahery no ampiasain'ny orinasa tsy miankina iray mba hiambina ny Departemantam-panjakana Amerikana sy ny miaramila, ny fotodrafitrasa sy ny toby ifotony ao Iraka.
Triple Canopy, Dynacorp ary Blackwater no iantsoina ireo orinasa nanakarama Filipiana mpikarama an'ady.
Nanambara ny mpanao gazety Filipiana iray fa nahazo trano 25 metatra tao amin'ny tobin'ny tafika amerikanina teo aloha tany Filipina ny Blackwater mba hitarika fiofanana ara-tafika fiavotan-tena.
Afaka nitafatafa tamina Filipiana mpikarama an'ady iray momba ny zava-tsarotra sy ny tombontsoa amin'ny maha mpiasa mitam-piadiana ao Iraka miambina ireo fotodrafitrasa miaramila Amerikana ilay mpanao gazety Filipiana sady bilaogera Ellen Tordesillas.
Tsy maintsy mandeha any Dubai, Jordania na Koety ireo mpikarama an'ady Filipiana noho ny fandraràn'i Filipina ny fandefasana mpiasa any Iraka taorian'ny fakàna an-keriny mpiasa Filipiana iray nataon'ireo mpikomy Irakiana tao amin'ny tobin'ny miaramila Amerikana tamin'ny taona 2004 .
Nampitandrina momba ny faharatsian'ny fiarovana amin'ny fandefasana mpikarama an'ady Filipiana miady ho an'ny tafika Amerikana ny Senatera Aquilino Pimentel . Hoy izy:
“Ny olana fanampiny dia ireo mpikarama an'ady ireo izay mety hahatonga ny firenena sy ny masoivohontsika ary ny asa ara-barotra ho sahirana amin'ny fanoherana fanafihana ataon'ireo izay voatafik'ireo mpikarama an'ady any Iraka .”
Filipiana maro no maniry hiasa any Iraka rotiky ny ady satria mandray 1700 dolara isam-bolana izy ireo fara-fahakeliny. Ny karama farany ambany ao Filipina dia 116 dolara monja isam-bolana.